Somalia: Ardayad Soomaaliyeed oo sadex jeer xuduud uga gudubtay si ay u hesho waxbarasho wanaagsan !!!! - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ardayad Soomaaliyeed oo sadex jeer xuduud uga gudubtay si ay u...
Raxma Xuseen Nuur waa gabar Soomaaliyeed oo ah ardayad, waxayna go’aansatay inay qoyskooda kasoo tagto markii saddexaad oo ay gudubta soohdinta u dhexeeya Kenya iyo Somalia si ay u hesho waxbarasho wanaagsan.
Ardaydan Soomaaliyeed oo la hadlaysay wargeyska The Standard ee Nairobi kasoo baxa ayaa xustay inay go’aansatay inaysan sii joogin dalkeeda oo ay qoyskeedu dib ugu laabteen, iyadoo sheegtay inay mar saddexaad xadka Kenya kasoo gudubto si ay riyadeeda mar walba ku taagan ee aqoon-raadiska ah ay u tiigsato.
Raxma iyo Qoyskeedu waxay Somalia ka carareen sannadkii 2009-kii, waxayna ku biireen Qoxootiga ku jira Xeryaha Dhadhaab ee Kenya ku nool, halkaasoo muddo lix sannadood ah ay ku noolaayeen.
Waxayse qoysku dib ugu soo laabteen dalka Somalia, inkastoo ay Raxmo sheegtay inaysan filayn inay dib ugu laabanayso Soomaaliya, marka la eego nolosha iyadu ay ku haysatay Xeryaha Dhadhaab.
“Noloshu waxay ku wanaagsan tahay halkan [Xeryaha Qoxootiga]. Waayo halkaan kama jiraan qaraxyo iyo hanjabaado,” ayay tiri Raxma Xuseen Nuur. Waxayna ku dartay intaas in iyada iyo qoyskeedu ay dib ugu laabteen Muqdisho bishii Ogoosto ee sannadkii hore ee 2015-ka, kaddib heshiiskii dib u celinta Qoxootiga ee Somalia, Kenya iyo Hay’adda Qoxootiga Adduunka ee UNHCR dhexmaray.
Raxma isla sannadkaas 2015-ka ayay waxay gashay Imtixaankii KCSE ee waddanka Kenya. Waxayna Raxma Xuseen ka mid tahay qaar ka mid ah Qoxootiga Dhadhaab ku nool ee ay dib u celinta Qoxootigu saameynta ku yeelatay Waxbarashadoodii.
“Dhab ahaantii, lacagta waxbarashada Kenya waa mid aad u badan. Balse Xeryaha lacag ma bixinno. Somalia waxbarashadu waa lacag… Aabbahayna ma awoodo inuu bixiyo lacagta waxbarashada,” ayay hadalkeeda raacisay Raxma.
Qoxootiga ku nool Xeryaha Dhadhaab ee Kenya – ayaa waxay si joogto ah u helaan raashin, dawo iyo lacag caddaan ah oo gaaraysa 15,000 oo shillinka Kenya ah, taas oo la siiyo qof walba.
“Iyadoo ay taasi jirto, haddana lacagta iskuulka inaan helo ma ahan mudnaanta ee waa inaan nabad-galyo helo,” ayay mar kale tiri Raxma Nuur, oo intaas ku dartay in qorshaha Aabbaheeda iyo qaybaha kale ee qoyskeedu ay ahayd inay iska guursato si aan badbaado u helo.
Waxayna hadalkeeda raacisay. “Waxaan Go’aansaday in aan Xeryaha Qoxootiga ku soo laabto si aan waxbarashadayda u sii wato. Waayo nolosha deegaanada kale iyo Tan Xeryaha Qoxootiga isku mid ma ahan. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan mar kale dib ugu laabto.“
Raxma waxay ka mid ahayd gabdho Talaadadii lasoo dhaafay Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya kula kulmay Malala Yousafzai, iyadoo booqashadeedu ay ahayd sidii ay ugu kuur-geli lahayd Waxbarashada Dumarka ku nool xeryaha Qoxootiga ee Dunida ugu weyn.
“Halkan [Dhadhaab], Waxaan doonayaa inaan ugu sheego gabdhaha Soomaalida ah inay sare u qaadaan waxbarashadooda,” ayay tiri Malala oo intaa ku dartay inay ku boorrinayso dhammaan haweenka inay waxbartaan si ay nolol wanaagsan u helaan.
Ugu dambeyn, Raxmo Xuseen Nuur waxay sheegtay inay rajeynayso inay Dalkeeda ugu adeegto aqoon oo ay waxbarashada sii waddo. Waxayna hablaha kale ee iyada la midka ah ugu baaqday inay dariiqeeda raacaan oo ay wax-bartaan.
Somaliland: Akhri Magacyada Qaar Ka Mid Ah Xildhibaano Badan Oo Ka Tirsanaa Xisbiga Kulmiye Oo Shalay U Codeeyay Xildhibaan Talyanle Oo Xisbiga WADDANI Watay Iyo Gudoomiye Baashe Oo Dirqi Kaga Badbaaday Guul Daro.
“Guddoomiyaha WADDANI Ha La Weydiiyo Xeerarka Iyo Doorashada” Xildhibaan Kijaandhe